Lenovo Tab 4 ga - emelite gam akporo 8.1 Oreo na November | Gam akporosis
Edere Ferreno | | Lenovo, Gam akporo nsụgharị
Mmelite na gam akporo 8.1 Oreo na-aga n'ihu nwayọ nwayọ. Ọ bụghị naanị na ahịa ama, dịka mbadamba nkume na-ejikwa nwayọ nwayọ na nke a. Ezigbo ihe atụ nke a bụ Lenovo Tab 4, nke na-enweghị mmelite ahụ. Mana ndị ọrụ ga-eche obere oge iji nweta ya.
Ebe ọ bụ na e gosiri na Ndị a Lenovo Tab 4 ga-echere ruo na njedebe nke afọ a iji nweta mmelite a na gam akporo 8.1 Oreo. Ma ọ dịkarịa ala, ekwenyela na ha ga-enweta mmelite ahụ. Nke opekata mpe bụ enyemaka maka ndị ọrụ jiri ha.
Chineselọ ọrụ China ekwenyela na ha na-arụ ọrụ na mmelite ndị a. Mana nke ahụ ga-ewe ọnwa ole na ole iji ruo ngwaọrụ ndị ọrụ. Na mgbakwunye, na ozi nke ụlọ ọrụ ahụ kesara enwere nkọwa zuru ezu dọtara uche.
N'ihi na Lenovo kwadoro na Lenovo Tab4 8, Lenovo Tab4 8 Plus, na Lenovo Tab4 10 ga-emelite gam akporo 8.1 Oreo. Ma ndepụta a na-efu otu n'ime mbadamba na ezinụlọ a. Iji kọwaa ya, Enweghị ihe ọ bụla ekwuru banyere Tab4 10 Plus. Nke setịpụrụ mkpu.
Ebe ọ bụ na o yiri ka ihe nlere a agaghị enwe ike imelite gam akporo 8.1 Oreo dị ka ụdị atọ ndị ọzọ ha ga-enwe ike ịme. Ihe kpatara na etinyeghị mbadamba nkume a na listi amaghị. Mana ọ bụ ihe ịtụnanya n’otu n’otu n’ime mmadụ anọ ahụ aka ekpe.
Mmelite ga-amalite ịbata na Nọvemba. Ọ bụ ezie na nke a bụ ụbọchị akara ndị China nyere, mana enwere ike igbu oge na nke a. O yiri ka ọ ga-abụ mmelite ikpeazụ nke sistemụ arụmọrụ nke ọtụtụ mbadamba ga-enwe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Lenovo » Lenovo Tab 4 agaghị enwe gam akporo 8.1 Oreo ruo na njedebe nke afọ